Khiimeynta Khudbadaha ay jeediyeen 10-ka Musharax iyo Salaad Cali Jeelle oo Khudbadii ugu qosolka badneyd jeediyay (Daawo) - iftineducation.com
iftineducation.com – 10-kii u horeeyay ee Musharaxiinta 25-ka ah ee u taagan Xilka Madaxtinimada Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta ilaa caawa ay ka hor-jeediyeen Fadhigii Xildhibaanada baarlamaanka, iyadoo musharax walba uu ka hor-jeedinayay Baarlamaanka waxqabadkiisa.
Khudbadaha Musharaxiinta oo si toos looga daawanayay Telefishinada ayaa waxaa Musharax walba la siiyay 20-daqiiqo inuu ku soo koobo Khudbadiisa.
Ugu horeyn Gudoonka Baarlamaanka ayaa sheegay in musharax walba looga baahan yahay inuu waqtiga ilaaliyo, aragti fog ku cabiro khudbadiisa, si uu u muujiyo himilooyinkiisa hadii la doorto.
Prof. Axmed Ismaaciil Samatar ayaa ahaa musharaxii u horeeyay ee Khudbad ka horjeediyay Baarlamaanka, waxaana uu daah fur u ahaa Khudbadaha Musharaxiinta, isagoo qodobo badan ka hor sheegay hadii la doorto.
Qodobada uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa in marka la doorto uu sameyn doono is bedel ku dhisan is faham, waxaana uu xusay in Mushaarkiisa uu uga jari doono Ardayda aan laga bixi karin lacagaha, si ay wax u bartaan.
Waxaa uu sheegay hadii la doorto uu soo celin doono awoodii, sharafkii iyo qiimaha ay Soomaaliya aduunka ku laheyd uu soo celin doono, isagoo ka dhawaajiyay in hadii Nabad la helo ay Caasimada Muqdisho noqon doonto Caasimada ugu bilicda badan uguna qanisan.
Khudbada labaad ayaa waxaa qaatay Xuseen Khaliif Jaamac oo isna ka hadlay ajandayaashiisa marka dib loo doorto, waxaana uu xusay inuu soo celin doono heykalkii dowladnimo, iyo karaamadii umada Soomaaliyed ay laheyd.
Musharaxa Maxamed Axmed Saalax ayaa isna khudbada 3aad uu ka jeediyay fadhiga Baarlamaanka ka sheegay Baarlamaanka hortiisa in hadii la doorto inuu Ra’iisul Wasaare u magacaabayo Xildhibaan Abshir Cabdi Dhoore.
Khudbada afaraad ayaa waxaa qaatay siyaasiga C/llaahi Axmed Caddow oo isna xusay inuu abuuri doono ciidan qaran oo la wareega ammaanka, isla markaana Ciidamada Ajnabiga ay tababar siin doonaan Ciidamada Soomaalida.
Maxamed C/llaahi Oomaar oo horay u soo noqday Ra’iisul Wasaare kuxigeen ahna Wasiirkii Arrimaha Dibada iyo wasiiro kale ayaa sheegay in kulanka maanta ay u fadhiyaan Xildhibaanada inay ku timid dad badan oo u dhintay ayaa sheegay in 7-Wasiir iyo 22-Xildhibaan, saraakiil iyo ciidamo badan ay u soo dhinteen.
Waxaa uu sheegay inuu xiriirka arrimaha dibada wanaajin doono, isla markaana uu wada shaqeyn la yeelan doono Xukuumada uu soo dhiso.
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Shariif Sheekh Axmed oo Khudbada lixaad jeediyay ayaa aheyd mid dhinacyo badan taabaneysay, ugu horeyn waxaa uu soo qaatay markii loo doortay Madaxweynaha shirkii Jabuuti, waxaana uu cadeeyay in iyadoo adkeyd in Caasimada lagu shaqeeyo ay goosteen inay u guuraan, isagoo tilmaamay in markiiba madaafiic lagu soo tuuray.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in saddexdii xukuumad ee u dambeeyay ay marba marxalad ay soo martay, xukuumadii u horeysay oo howsha bilowday, xukuumadii xigtay oo amniga bilowdya iyo xukuumadan u dambeysay oo dhamaan dhameystirtay adeegyadii oo dhan.
Waxaa uu sheegay in horumar laga gaaray Barnaamijkii geedi socodka nabada ee Road Map-ka, waxaana uu tibaaxay in la ansixiyay dastuurka, haatan dalka leeyahay dastuur, waxaa uu sheegay hadii la doorto uu dhaqaalaha kor u qaadi doono, isla markaana dalkana maal gashi lagu sameeynayo, waxaa uu xusay in afar sano kadib uu suura gelin doono doorasho xor ah oo dadka ay doortaan, min Tuulo ilaa degmo dadka ku nool ay doortaan.
Ra’iisul Wasaaraha xilligiisa dhamaaday C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa isna sheegay in Xukuumadiisa Badbaado qaran ay wax badan qabatay, isagoo xusay in 70% Muqdisho aheyd mid gacanta ugu jirta Shabaab, isla markaana suura gelisay in Caasimadii dalka oo dhan la qabto, Gobolada qaar iyo magaalooyin Al-Shabaab gacanta ku hayeen.
Waxaa uu sheegay hadii la doorto inuu la dagaalami doono musuq maasuq, isla markaana uu dhisi doono ciidan qaran.
Ra’iisul Wasaarihii ka horeeyay Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa aheyd mid dhinacyo badan taabaneysay, ugu horeyn waxaa uu xusay in markii xilka loo magacaabayay uu qodobo dhowr ah muhiimad saaray, Ammaanka, dareyleyka Ciidamada iyo la dagaalanka musuq maasuq, kuwaasoo uu xusay in dhamaan ka soo baxay.
Farmaajo ayaa sheegay in Madaxtooyada loo jira wax ka yar hal KM markii loo magacaabayay, isla markaana xabada wiiftada ay soo gaareysay, waxaa uu tilmaamay inuu ku guuleystay in Taliyeyaasha Guutooyinka inuu siiyo mushaar, isagoo xusay in saddex safar uu dibada ugu baxay, isla markaana uu joojiyay diyaaradihii gaarka ahaa ee madaxda raacaan qarashaadka badan ay uga baxaan diyaaradaha gaarka iyo Hotelada, waxaana uu tibaaxay in lacagahaas uu ku bixiyay mushaarka iyo daryeelka Ciidamada iyo Ciidamada naafada ahaa oo mushaar u bilaabay.
Waxaa uu sheegay in markii uu ka tanaasulay xilka Ra’iisul Wasaaraha uu qasnada uga tagay lacag dhan 7-Milyan.
Khudbada ugu qosolka badneyd ayaa aheyd khudbadii uu jeediyay Salaad Cali Jeelle, waxaana Xildhibaanada oo markii hore marba dhinac madaxa u jeedinayay khudbadihii Musharaxiinta ay mar qudha ay caajiska ka kaceen.
Salaad Dheere ayaa Khudbadiisa qaar ahaa mid uu ku durayay madaxdii dowladda soo maray inay musuq maasuqeen, waxaana uu tibaaxay in hadii la doorto uu tir tiro doono Burcad badeeda iyo Xagjirka, waxaa uu sheegay in isaga uu ahaa ninka soo dhoweeyay Cutubkii u horeeyay Ciidamada AMISOM, isla markaana haatan ay sheegayaan mas’uuliyiinta kale guulaha la gaaray.
Waxaa uu sheegay in isaga hadii la doorto dalka biyo macaan heli doonaan, isagoo isku sifeeyay inuu yahay nin ka war hayay xaalada qoysaska danyarta ah, maadaama uu ku soo koray, isla markaana aysan ka warheyn musharaxiinta kale.
Sidoo kale waxaa uu halku dhig uga dhigay musharaxnimadiisa Boorkiisa Lacagta waa qaadasho, Codkana waa aniga, waxaana uu carabka ku dhajiyay in Hal Doolar xataa heyn, isla markaana musharaxiinta kale ay lacagta ka aruursadaan Xildhibaanada, taasoo aheyd tan ugu qosolka badneyd.
Ugu dambeyn Musharaxa ugu dambeeyay ayaa ahaa Cumar Salaad Cilmi oo noqday ninka kaliya ee waqtiga ku dhamaaday sidii uu u hadlayay, taasoo keentay in Gudiga doorashada ay u sheegaan in waqtiga ka dhamaatay, waxaana uu sheegay in hadii la doorto uu dhisi doono 60-kun Ciidamo, oo 30-kun ay yihiin Ciidamo Boolis iyo 30-kun ay yihiin Milateri.